Al-shabaab Oo Sheegtay Inay Ku Biirtay Urur-weynaha Al-Qaida, Sheekh Shariif Oo Ka Hadlay Doorkii Uu Ku Lahaa Inay Ku Fidaan Mandaqada Iyo Yuusuf Indhacade Jawaab Ka Bixiyay Saamaynta Arrintaa – Araweelo News Network (Archive)
Muqdisho(ANN) Kooxda Al-shabaab ee ka dagaalama Somalia ayaa sheegay inay isku biireen Urur weynaha Al-Qaida ee ku filqan caalamka oo horeba loola xidhiidhinayay.Sida lagu sheegay shebekada ku hadasha afka Al-shabaab, Sheikh Mukhtaar Abu Zubeyr
oo ah hogaamiyaha Al-shabaab ayaa fariin cod ah u diray Amiirka Al-Qaida ee Caalamka Sheikh Dr Ayman Al- Dawaahiri. Fariintaa ayaa lagu sheegay in Sheikh Abu Zubeyr oo ka wakiil ah Madaxda iyo askarta Xarakada Mujaahidiinta Al- Shabaab ay Bayco la galayaan uruweynaha Caalamka ee Al Qaida. Iyadoo dhinaca kalena Sheikh Dr. Ayman Al -Dawaahiri uu soo dhaweeyey inay ku biiraan urur-weynaha Al- Qaida Xarakada Mujaahidiinta Al Shabaab ee ka dagalaama Somalia.
Maxamed Yusuf Indhacade oo hore u ahaan jiray qabqablayaashii dagaalka ee Somalia, isla markaana mar ka tirsanaa kooxda Al –shabaab, waqtigana sarkaal dawladda taagta daran ee Somlia ah, ayaa sheegay in xiligii uu ku jiray Al -shabab ay ka tirsanayd Urur weynaha Al -Qaida, balse ay jirtay afkaar lagu kala qaybsanaa xiligaa oo ahayd koox doonaysay in dalka lagu xukumo Diinta islaamka iyo kuwa ku shaqeynayay afkaarta dhabta ah ee Al –Qaida.
Yuusuf Indhacade ayaa sheegay in Dr. Ayman Al-Dawaahiri iyo Axmed Godanena (Abu Zubayr) ay yihiin wiil iyo aabihii oo aanay waxba soo kordhinayn isku biiritaanka kooxda Al- shabaab iyo ururka Al –Qaida.
Dhinaca kale Madaxweynaha Dowlada taagta daran ee Somalia Sheekh shariif ayaa ka hadlay aas- aaskii kooxda Al- shabaab iyo doorkii uu ku lahaa, iyadoo dadka reer Muqdisho qaarkood rumaysan yihiin inuu weli xidhiidh la leeyahay kooxdaa. Shariif waxa uu sheegay in markii horaba uu ogaa in kooxda Al -shabaab ay jireen, balse ay soo shaac bixiyeen.
Sheekh Shariid, waxa uu sheegay inuu 2004, ka tirsanaa 7 maxkamadood o muqdisho ka jirtay, kuwaas oo sida uu xusay la doonayay in Soomaaliya lagu dhaqo Diinta islaamka, balse ay ogaadeen xili danbe inay soo baxeen dad aan ka tirsanayn tirada maxkamaddahaa oo Al -shabaab ahaa, kuwaas oo sida uu xusay diiday inay ku biiraan maxkamaddaha todobada ahaa ee Muqdisho ka jiray.
Laakiin xiligii kooxdii la dagaalanka aragagixisada ee hogaamiye kooxdeedyada dagaalkii lagaga erayay Muqdisho ay kooxdooda Maxaakimiintu arkeen iyadoo Al-shabaab doonaya inay ka qaybqaataan dagaalka hogaamiye kooxeedyada, taas oo ay soo dhoweeyeen, isla markaana ay fursad weyn ka heleen Al-shabaab dagaalkaa lagu eryay hogaamiye kooxeedyadii Muqdisho. Kadibna waqtigii maxkamaddaha ee lixda bilood ahaa ay ku fideen meelo baddan Al-shabaab oo ay fursad kale sii heleen 2006.